Aragtida Suubban ha ka sarriigan: Cashar ka qaado noloshii Jean-Jacques Roussseaus
By Ibrahim Aden Shire October 31, 2017
Jean-Jacques Rousseau waxaa loo aqoonsanyahay inuu ka mid yahay aqoonyahannadi ugu qiimaha badnaa qarnigii 18naad ilaa maantana ugu saamaynta badan culimada kasmo-nafeedda (psychology). Waa aabaha iyo marjica kasmo-nafeedda korniinka bini-adamka (developmental psychology). Waa ninka soo jeediyay nidaam maanta inta adduunka wax lagu baro caruurta ee loo yaqaan “child-centred approach”. Hase ahaatee waxaan oo qiimo ah waxay soo baxeen dhimashadiisi ka dib, intooda bandanna waxaa la fahmay 100 sano geeridiisi ka dib halka ilaa maanta la barto dhigaalkiisi iyo afkaartisi la
Cashar Muhiim ah ayaa noogu jiro Siyaasadda Arrimaha Dibadd ee Iiraan
By Ibrahim Aden Shire October 26, 2017
Kacaankaas waxaa uu abuuray collaytan dhinacyo badan ah. Ree Galbeedka oo uu diidan xorriyadda, Sunniyiinta oo ka caraysan shiico dowlad yeelatay iyo kooxo badan oo dowlado kale isticmaalayeen ayaa si joogta ah ula collaytamay. Jiho walba waxaa ka jiray cadow: Galbeedka Saddaam oo ujeedkiisu ahaa in la waayo wax Iiraan la yiraahdo, bariga Taalibaan oo qorshaheedu ahaa inay laayaan shiicada Iiraan oo dhan, koonfur-bari gobalka Baluchistan ee Pakistaan oo ah mid waligiis aan nabad arag, dhinaca koonfureedna waxaa ka xigay waddamada Carbeed oo cadaawad fog kala dhaxaysay. Intaas oo dab ku shidnaa I…
1: Lockheed Martin (Maraykan). Shirakadaan waxay ku taal gobalka Maryland ee Maraykanka. Waxay u samaysaa diyaaradaha dagaalka, radeerada, di…
Haddi aa tahay kan hore ogow waxa aad bixisay waa qashin iyo wasaq aad ka fogaysay naftaada, reerkaada iyo maalkaada. Qashin qofkii kaa fogeeyo mahadnaq ayuu mudan yahaye ma mudna manno sheegasho. Inay sadaqadu wasaq tahay waxaa noo sheegay Suubanaha SCW waana sababta loogu diid…
M dhabbaa Mise Way i dhuminayeen?
By Ibrahim Aden Shire October 16, 2017
Waxaan ahay qof aad u nasiib daran Waxaan dhashay Kadib markii aan gacmeheena isaga tuurnay dawladii dhexe, waxaan ku dhashay dhul aad u barwaaqo badan balse dadkiisii laga indha saabay, Wali indhaha ma saarin dawlad uu dhulkeyga leeyahay. Waxaan ku hanaqaaday Intii ay soconayeen digaalidii sokeeye, waxaan ifka imid umadii soomaliyeed oo Kala irdheysan, Waxaan dadaal dheer ugalay inaan ogaada taariikhda dalkayga, Wax ma aqrin aqoonin balse midaas igama aysan hor istaagin inaan dalkayga taariikhdiisa soo helo. Waxaan Wareeystey dadka iga waawayn, waxaan mar waliba ka maqli jiray "Alla yaa dawladii dhexe noo soo celiyo". Waan waydiiyay waxyaabaha ay ooga jeedaan ereyadaan ay mar waliba ku taahaayaan Waxay iiga sheekeyeen Wax aan Maskaxdayda Marnaba ka dhaadhaci karin, Waxay iiga sheekeeyeen Dad Aduunka Madaxiisa joogey maantana minja isku badalay.
Waxay igu dheheen: waxaan kamid ahaan jirnay dawladaha Afrika oogu quwada badan waligeen quursi lama aanan kulmin Waxaan laha…
"Dareenkayga markaan arko calankayga oo la qaybshay".
By Ibrahim Aden Shire October 12, 2017
Waxaan kamid ahay dhalinyaradii dhalatay burburkii kadib, ma arkin nidaam dawladeed iyo hannaan qaran, balse waxaan la koowsaday bur bur iyo qax, markaan caqli yeeshay waxay ila ahayd xaaladda aan kujiro in ay tahay xaalad caadì ah, waxaan xasuustaa hooyo iyo aabe markaan wada sheekaysanno in ay ka sheekeeyaan xilliyadii dawladda iyo noloshii wacnayd, waxaan oran jiray mararka qaar dawladdaas yaa noo soo celiyo, dugsigii qur'aanka kadib waxaan billaabay waxbarshadydii asaasiga ahayd, maaddooyinka waxaan ugu jeclaa maaddada af- Soomaaliga, waayo waxaa kujiray gabayo iyo sheekooyin aad u xiiso badan, waxaa jacayalkeeda igusii kordhiyay markaan taaganahay safafka daabuurka, waxaa nagula barbaariyay in aynu qaadno subax waliba astaanta qaranka iyo calanka, macallimiintana waxy nagu siin jirayn abaal marin kooxdii u cod qurxanaanta.
Xilliyadii waxbarsahada asaasiga ahayd iyo dugsiga qur’aanka waxaan arki jiray dadka oo aad u dhagaysta idaacadda BBC-da, balse nasiib darro waxaa soo ye…